WordPress Plugin: Pinda Nyore neTereport
Chipiri, August 21, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Wati wamboda here kuronga peji kana kutumira muWordPress uye wakanetsekana nekusagona kutsvaga nekuwana iyo posvo? Zvakadii nekungokwanisa kuwedzera posvo nyowani nyore? Zvakadii nekungokwanisa chete kuwana peji rekupinda zviri nyore? HighbridgeAnogadzira anotyisa, Stephen Coley, apedzisira apa mhinduro yekuti wese mushandisi weWordPress achada… Teleport.
Teleport yakashata inotonhorera diki menyu yako yega-inoitirwa WordPress blog iyo inobuda kana iwe uchida kuti ingori nekudzvanya "w". Mamwe mapfupi ekhibhodi anosanganisira:
e - (Hora) Rongedza razvino post / peji
d - (Dashibhodhi) Inodzosera kuDashboard
s - (Zvirongwa) Inodzosera kune iyo Zvirongwa peji
a - (Archive) Inodzosera kuPositi / Mapeji / Tsika Post Mhando
q - (Regedza) Matanda iyezvino mushandisi kunze / Anodzoreredza Kuti Upinde papeji
w - Vhura kana Vhara Teleporter
esc - Inovhara Teleporter
Saka, kana iwe ukaona typo pane rimwe remapeji ako… ingobaya "w" ichiteverwa na "e" uye voila! Iwe wakatumirwa teleport yakananga kune mupepeti kwaunogona kugadzirisa iyo posvo uye nekukurumidza kuburitsa. Heino vhidhiyo pfupiso yekuti sei Teleport inoshanda:
Stefano ane zvimwe zvekuwedzera zvinouya… asi ichi chatova chinoshamisa plugin kune chero WordPress mushandisi!
Tags: Stephen coleyteleportwordpress loginwordpress login menyuWordpress pluginmapfupi mapfupi
Vashambadzi Vari Kushandisa Sei Zvemagariro?
Aug 21, 2012 pa 9: 02 AM
Izvi zvakanaka, ndiri kuzviwedzera ipapo ipapo !!